ရင်နာစရာခွေးကလေးရဲ့ ပျော်စရာဇာတ်သိမ်း “ကျနော့်နာမည် အန်ဒရေးပါ။ ကျနော်က ၁၂ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျနော့်အမေနဲ့ ကျနော်က သူ့ကို ခင်ဗျားတို့ဆီကို ပို့ဖို့အတွက် ခက်ခက်ခဲခဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုလည်း အဖေ အလုပ်သွားတုန်း အိမ်ပြန်မရောက်ခင်မှာ ကျနော်တို့ခိုး ထွက်လာပြီး ခင်ဗျားတို့ ဂေဟာရှေ့မှာ လာထားရတာပါ။ အဲ့လိုမှ မလုပ်ရင် အဖေက ကောင်လေးကို ရောင်းစားပစ်မယ်လို့ ဆိုနေလို့ပါခင်ဗျာ။ ကျနော့်အဖေက ကောင်လေးကို အမြဲလို ညှင်းပန်းနှိပ်စက် နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ တွေ့တာနဲ့ အော်ငေါက်ဆဲဆိုပြီး ကန်ကျောက်ရိုက်နှက် တော့တာပါပဲခင်ဗျာ။ တစ်ခါဆိုရင် အဖေက ကောင်လေးကို ကန်လိုက်တာ အဝေးကိုလွင့်ပြီး နံရံနဲ့ တိုက်မိကာ အမြီးလေးကောက်သွားပါတယ်။ ရင်နာစရာခွေးကလေးရဲ့ ပျော်စရာဇာတ်သိမ်း1 ခင်ဗျားတို့ သူ့ကို …
ဒီ (၁၆) ချက်ကို အလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘ၀ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ပါ
ဒီ (၁၆) ချက်ကို အလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘ၀ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ပါ ဒီ (၁၆) ချက်ကို အလွတ်မှတ်နိုင်ရင် မင်းဘ၀ ဘယ်တော့မှ ဒုက္ခဆိုတာ မရှိနိုင်တော့ပါဘူးနော် … ။ လေ့လာပြီး မှတ်သားထားသင့်သော စကားလုံးများ …. ၁။ ကိုယ့်မျက်စိနဲ့ သေသေချာချာ မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် ပါးစပ်နဲ့ အလျင်စလိုသက်သေမပြချင်ပါနဲ့၊ ၂။ ကိုယ်မသိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို “ မသိဘူး ” လို့ တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုလိုက်တာ အပေါ့ပါးဆုံးပါ။ ၃။ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို ကျောက်ခဲနဲ့ ပေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ပြန်မပေါက်နဲ့တော့၊ အုပ်မြစ်တည်ဖို့ စုဆောင်းထားလိုက်ပါ။ ၄။ လူဆိုတာ ကျော်ကြားလာရင်တော့ အတင်းများမှာပဲ၊ အဲဒီ အတင်းတွေကိုကြောက်ရင် …
ဘွဲ့ရ နှင့် ငါးစိမ်း သည် ဘယ်သူ က ပညာပိုတတ်လဲ ဖတ် ကြည့်ပြီး ဆုံး ဖြတ် ကြည့်ပါ
ဘွဲ့ရ နှင့် ငါးစိမ်း သည် ဘယ်သူ က ပညာပိုတတ်လဲ ဖတ် ကြည့်ပြီး ဆုံး ဖြတ် ကြည့်ပါ ယနေ့မနက် ငါးကြော်လေးစားချင်လာသဖြင့် ဈေးထဲကို ငါးဝယ်ရန်ရောက်လာသည်။ ကျွန်တော် ဝယ်နေကျ ငါးဆိုင်ရှိသည်။ ငါးကြင်းတစ်မျိုးတည်းရောင်းပြီး ဖော်ရွေသည်။ ဝယ်သူအကြိုက် မညည်းမညူ လုပ်ပေးလေ့ရှိ သည်။ငါးရောင်းသူကို ငါးစိမ်းသည်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ငါးစိမ်းသည်ဆိုသည်မှာ စွာတာတာ၊ ကက်ကက်လန်၊ မိုက်ရိုင်းသည်ဟု ထင်လျှင် ကျွန်တော်ငါးဝယ်သည့်ဆိုင်မှ “မရွှေ” ကိုခေါ်ပြချင်ပါသည်။ “ဦးလေး မရောက်တာကြာပြီ … ဘာလဲ ဆိုင်ဟင်းကိုမုန်းလို့ ရောက်လာတာလား”“မဟုတ်ပါဘူး … ခရီးထွက်တာတွေ များနေလို့”“ငါးကြင်းဖြူ ဗိုက်သားလေးနဲ့တွဲထားတဲ့အပိုင်း ချိန်လိုက်မယ်နော်”“အစိတ်သားလောက်ပဲနော်”“၃၅ ကျပ်သားရှိတယ် ဦးလေးရယ် … ၃၀ …
အာသီးရောင်၍ လည်ချောင်းနာ ဖြစ်နေသူများအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်ကင်းစေသောနည်း အာသီးရောင်၍ လည်ချောင်းနာ ဖြစ်နေသူများအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း ပျောက်ကင်းစေသောနည်းလေးပါ …. ။ ရာသီပြောင်းရင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အာသီးရောင်တဲ့ လက္ခဏာဟာ အစားအစာများ မြိုချပါက လည်ချောင်းအတွင်း ခံစားရခက်အောင် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နာကျင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ ပထမ အဦးဆုံး ရေနွေးဖြူထဲသို့ အိမ်သုံးဆား တစ်ဇွန်းခန့်ထည့်၍ ရောမွှေပြီး ၎င်းဆားရည်(Salt water)ဖြင့် ခေါင်းမော့၍ အာခေါင်အတွင်းရောက်အောင် ပလုပ်ကျင်းပေးပါ။ သဘောင်္သီး နုနုထွတ်ထွတ် တစ်လုံးကို အပင်မှ ခူးဆွတ်၍ ရေသန့်စင်အောင်ဆေးကြောပြီး အလုံးလိုက် ကြေညှက်အောင် ဝါးစားပြီး မြိုချ လိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးနည်းကတော့ ….. (ပျားရည်စစ်စစ်+ဂျင်း(ချင်း) နှင့် သံပရာသီး(သို့)ရှောက်သီး)ဂျင်းကို …
တနင်္လာ သားသမီးလေးတွေကို ချစ်သူ တော်မယ် ဆိုရင်သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ
တနင်္လာ သားသမီးလေးတွေကို ချစ်သူ တော်မယ် ဆိုရင်သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ တနင်္လာတွေဟာ မိတ်ဆွေ ပေါများတယ်။ လူချစ်လူခင်လည်း ပေါများတဲ့ နေ့နာမ်ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်တယ် …။ ဒေါသထွက်တတ်ပေမဲ့ အပြင်မှာ ထုတ်ပြီး အရမ်းမပွားပါဘူး။ မိသားစုအပေါ်မှာ ဆိုရင်တော့ နဲနဲ စိတ်မရှည်တတ်ဘူး။ အစွဲအလန်း ကြီးပါတယ် …။ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် အပေါ်မှာဘဲ စွဲလမ်းနေတတ်တယ်။ စကားပြောရင် ဆွဲဆောင်မှုရှိစွာနဲ့ ပြောဆိုတတ်တာ တနင်္လာပါ …။ ခင်ရတဲ့ အပေါင်းအသင်းနဲ့ စကားပြောနေချိန် စိတ်ရှည်စွာနဲ့ စိတ်ဝင်တစား လက်ခံ နားထောင်ပေးတတ်တယ် …။ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ နေတတ်သလို သူများကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ တခါတရံ ဖန်တီးပေးတတ်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေကို …
ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ကျမိပါတယ် ” ဆည်မနိုင်တဲ့ စုန်ရေ ” တဲ့ ဖတ်ကြည့်ပါနော်
ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ကျမိပါတယ် ” ဆည်မနိုင်တဲ့ စုန်ရေ ” တဲ့ ဖတ်ကြည့်ပါနော် ကျတော်ဖတ်ပြီး မျက်ရည်ကျမိပါတယ် … ” ဆည်မနိုင်တဲ့ စုန်ရေ ” တဲ့ ဖတ်ကြည့်ပါနော် ဆည်မနိုင်တဲ့စုန်ရေ “အမေကသားကို မချစ်ပါဘူးဗျာ” “နင်က ချစ်စရာ ကောင်းတာကိုး အကောင်ရဲ့” “အမေက သားကို ဆိုအကောင်းကိုမပြောဘူး” “အေးဟေ့ ငါ့သားလေး သိပ်ချစ်တာပဲ တွေ ဘာတွေ ပြောမနေအားဘူး ၊ လုပ်စားရတာ မောရတဲ့ကြား နင်ကတစ်မျိုး ရော့ ဒီမှာ လက်ဖက်ရည်ဖိုး ထားခဲ့တယ် သွားမယ် ” ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်သည်။ သေချာအောင် စောင်ထဲက ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ပိုက်ဆံ တစ်ထောင်တန်ကိုမြင်မှ စောင်ခြုံပြီး …
စံပယ်ပင်လေးတွေ အပွင့်များများပွင့်အောင် ဒီလိုစိုက်ပါ…
စံပယ်ပင်လေးတွေ အပွင့်များများပွင့်အောင် ဒီလိုစိုက်ပါ… (၁) စံပယ်ပင်လေးတွေစိုက်တော့မယ်ဆိုရင် အိုးနဲ့စိုက်မှာလား၊ မြေမှာ ချပြီးစိုက်မှာလား… ရွေးပါ။ အိုးနဲ့စိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း အိုးက ရေမဝပ်အောင် အောက်ခြေမှာ အပေါက်လေးတွေပါတဲ့အိုးနဲ့ စိုက်ပါ။ မြေမှာ စိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ရေမဝပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာ စိုက်ပါ …။ (၂) စံပယ်ပင်လေးတွေဟာ နေရောင်ကြိုက်ပါတယ်။ အလင်းရောင် ကောင်းကောင်းရတဲ့ နေရာလေးမှာ စိုက်ပါ …။ (၃) စံပယ်ပင်လေးတွေကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ရေလောင်းပါ။ ရေလောင်းတဲ့အခါမှာ အောက်ခြေမြေကြီးကိုပဲ လောင်းပါ။ သစ်ရွက်လေးတွေကို ရေမစိုပါစေနဲ့။ စံပယ်ရွက်လေးတွေကို ရေစိုသွားရင် နေရောင်နဲ့ထိတဲ့အခါ အရွက်လေးတွေ ပုပ်သွားတတ်ပါတယ် …။ (၄) စံပယ်မျိုးစိတ်အများစုက နွယ်တက်တတ်ပါတယ်။ စံပယ်ပင်နားမှာ တိုင်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ စင်လေးဖြစ်ဖြစ် ထားပေးပါ …။ …
ဘယ်သူ့ကိုမှမှီခိုစရာမလိုတဲ့မိန်းမသားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အရာများ မိန်းကလေးဆိုတာနဲ့ မှီခိုတတ်တဲ့သူ၊ ပျော့ညံ့တဲ့သူတွေလို့ သတ်မှတ်လို့မရတဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာပါပြီ။ လူတိုင်းကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့၊ အမှီအခိုကင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို အမြဲတမ်းခေါင်းထဲရှိနေအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးနေဖို့လိုပါတယ် …. ။ (1) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်ခံနိုင်ရမယ် … ကိုယ့်ရဲ့ချို့ယွင်းချက်၊အားနည်းချက်တွေကိုပဲတွေးပြီး စိတ်ညစ်နေမယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်သန်မာတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ သန်မာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင် ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်ရမယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ရပါမယ်။ (2) ကိုယ်တိုးတက်ဖို့ဦးစားပေးရမယ် … အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပညာရပ်တစ်ခုခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုက်ဆံနဲ့တခြားအရာတွေထက် ကိုယ်တိုးတက်ဖို့ကို ပိုပြီးဦးစားပေးရပါမယ်။ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အတွက်အသိပညာတစ်ခုခုရအောင် ယူတတ်ရပါမယ်။ (3) အတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့နိုင်ရမယ် ဒါပေမယ့် သင်ခန်းစာတော့ယူနိုင်ရမယ် … လူတိုင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာ၊ နာကျင်စရာ အတိတ်ဖြစ်ရပ်တွေ အနည်းနဲ့အများတော့ရှိတတ်ကြတာချည်းပါပဲ။ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေထဲကနေရုန်းထွက်ပြီး ဘဝကိုရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ …
ကွန်ပြူတာကီးဘုတ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် လျှို့ဝှက်ချက်လေးများ
ကွန်ပြူတာကီးဘုတ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် လျှို့ဝှက်ချက်လေးများ ကွန်ပြူတာဆိုတာဟာ ကိုယ့်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုပေမယ့် အသုံးဝင်အောင်သုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီတော့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ဘယ်လိုလှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာ ပြောပြသွားမှာပါ။ (1) Control + T Browser မှာ အခြား Tab တစ်ခုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် မောစ်နဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာကို သွားကလစ်နေဖို့မလိုပဲ Control + T နှိပ်လိုက်ရင်လည်း ရပါတယ်။ (2) ကွန်ပြူတာမှာ error တစ်ခုခုတက်ခဲ့လျင် ပညာရှင်ဆီသွားမပြခင် အရင်ဆုံး ဂူးဂဲမှာရှာဖွေကြည့်ပါ။ ဂူးဂဲပေါ်မှာ ထောင်ချီတဲ့ ကွန်ပြူတာပြဿနာတွေအတွက် အဖြေရှိပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ကုန် သက်သာစေမယ့်အပြင် ပြင်ဆင်ခ ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ (3) ငွေလဲနှုန်းတွေကို သိချင်တယ်ဆိုရင် ဂဏန်းပေါင်းစက်နဲ့တွက်ချက်နေစရာမလိုပဲ ဂူးဂဲ search …
This Year : 147027
Total Users : 442160
Total views : 1700053